अक्षराङ्कन प्रणालीमा उत्कृष्ट ठानिएकाहरु के भन्छन् ? | We Nepali
अक्षराङ्कन प्रणालीमा उत्कृष्ट ठानिएकाहरु के भन्छन् ?
वीनेपाली | २०७३ असार ३ गते १२:०९
काठमाडौँ, ३ असार । दायाँ हातमा काम्रो बाँधेर परीक्षा दिएका कोटेश्वर निवासी सौरभ पोखरेलको नतिजा कस्तो होला भनेर अभिभावकलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक थियो । बिहीबार सार्वजनिक २०७२ सालको एसएलसी परीक्षामा पोखरेलले ‘ए प्लस’ श्रेणीमा ३ दशमलव ९ स्तरीकृत ग्रेड ल्याएपछि अभिभावकमा खुसी छायो ।
मीनभवनस्थित भिएस निकेतनमा शिशु कक्षादेखि पढेका सौरभ यसअघिका परीक्षामा पनि उत्कृष्ट हुँदै आएका थिए । उनले गत टेस्ट परीक्षामा ९४ प्रतिशत ल्याएका थिए ।
कुल ४ ग्रेडलाई उच्चतम ग्रेडलाई एक सयले गुणा गरी चारले भाग गर्दा सौरभले पाएको कुल प्रतिशत ९७ दशमलव ५ हुन्छ ।
स्थायी घर धनुषाको बेगाडाबर रहेका सौरभका आमा मञ्जु पोखरेलले भन्नुभयो – ‘‘परीक्षा हुनु चार दिनअघि लडेर हात भाँच्चिएको थियो, सहयोगी राखेर लेखाउँदा पनि राम्रो नतिजा ल्यायो । हामी खुसी छौँ ।’’ उनका बुबा गोविन्द पोखरेल वीर अस्पतालमा प्राविधिक हुनुहुन्छ ।
भिएस निकेतनका संस्थापक प्रिन्सिपल डा बाबुराम पोखरेल सौरभको नतिजाबाट विद्यालयमा पनि उत्साह छाएको बताउनुभयो । त्यसो त, सो विद्यालय धेरैपटक उत्कृष्टमा आइसकेको छ ।
कपनस्थित जोसेफ स्कुलकी प्रिया धितालले ३ दशमलव ९ ग्रेड पोइन्ट ल्याएकी छिन् । विद्यालयका प्रिन्सिपल सूर्यबहादुर अधिकारीले छात्रातर्फ धितालको सो ग्रेड सर्वाेत्कृष्ट हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो ।
स्तरीकृत अङ्क ३ दशमलव ८० ल्याउने मालीगाउँस्थित अनमोल ज्योति माविका गरिमा आचार्य (सिम्बोल नम्बर ०३१०२५४ ‘भि’) चाहिँ विज्ञान पढ्ने धोकोमा छिन् । यसलाई प्रतिशतमा निकाल्दा ९५ हुन्छ । रेडियो नेपालका पत्रकार भुवन आचार्यका छोरी गरिमालाई त्यो भेगकै विद्यालयमध्येकी प्रथम मानेर सम्मानित गरिएको छ ।